‘सके जति काम पाँच वर्षमै गरें, फेरि अध्यक्ष हुन चाहन्नँ’ – Nepal Press
२०७८ चैत २९ गते ११:४७
सिन्धुपाल्चोकका १२ स्थानीय तहमध्ये आन्तरिक आम्दानी सबैभन्दा कम भएको लिसंखुपाखर गाउँपालिका हो । काभ्रे, दोलखा र रामेछापसँग सीमा जोडिएको यो गाउँपालिकामा नेकपा एमालेका तत्कालीन जिल्ला सचिव र हालका जिल्ला अध्यक्ष कमल नेपाल गाउँपालिका अध्यक्षमा निर्वाचित भएका थिए ।
गाउँपालिकाको सात वडामध्ये दुई वडा मात्रै एमालेले जितेको थियो । अर्थात कार्यपालिकामा उनीनिकट दलको बहुमत थिएन । तर पाँच वर्षे कार्यकालमा अल्पमत भएकोले काम गर्न नसकेको गुनासो नेपालले कहिले पनि गर्नु परेन । आन्तरिक आम्दानी कम भएपनि गाउँपालिकावासीले अपनत्व हुने गरेर धेरै जनमुखी कामको सुरुवात नेपालले गरे ।
मिलनसार र नम्र स्वभावका भएका कारणले पनि विपक्षीहरुले समेत उनलाई कहिले पनि प्रहार गर्न सकेनन् । अध्यक्ष नेपाल अब नेतृत्व नदोहोर्याउने पक्षमा छन् । उनै नेपालसँग पाँच वर्ष स्थानीय सरकारको प्रतिनिधि भएर काम गर्दाको समीक्षा, अनुभव र चुनावमा गरेका वाचा कति पूरा भए भन्नेबारे नेपाल प्रेसकर्मी दिनेश थापाले गरेको कुराकानी–
आफ्नो पाँचवर्षे कार्यकालको मूल्यांकन कसरी गर्नुभएको छ ?
पाँचवर्षे कार्यकाल अत्यन्तै कामकाजी, महत्वपूर्ण र उपलब्धीपूर्ण भएको छ । हामी निर्वाचित भएर आउँदा गाउँपालिका पूर्णतया नयाँ संरचना थियो । पहिला त हामी कसरी काम गर्ने भन्ने नीतिगत समस्या थियो र हामीले पहिलो प्रथामिकतामा नीति कार्यक्रम, ऐनलगायतका कार्यविधिहरु तत्काल गाउँसभाबाट निर्माण गरेर कामको सुरुवात भयो । भौतिक पूर्वाधारको हिसाबले हाम्रो आफ्नै भवन नभएकाले, आफ्नै भवन निर्माणको काम थालनी गरेर केही वर्षभित्रै आफ्नै भवनबाट जनतालाई सेवा दिन सुरुवात गरेका थियौं ।
हामीलाई सुरुमा नीतिगत हिसाबले नीति, नियम र ऐन कानून नै थिएन । यसको समस्या थियो । त्यस्तै संस्थागत क्षमता विकास गर्ने काम र तेस्रो, जनशक्ति अभावलाई पूरा गर्न हामी सुरुका वर्षहरुमा लागेका थियौं । हामी धेरै चुनौतीबीच निर्वाचित भएका थियौं । हामीसँग कार्यालय सञ्चालन गर्ने भौतिक संरचना नै थिएन । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र लेखा अधिकृत मात्रै कर्मचारी थिए ।
हामीले माथिल्लो निकाय र हामी आफैंले पनि विस्तारै सबै समस्याहरु समाधान गर्दै गएका थियौं । समग्रमा भन्नु पर्दा ५ वर्षे कार्यकाल अत्यन्तै उत्साहप्रद, उपलब्धीमूलक र ऐतिहासिक रह्यो भन्ने बुझाइ छ । र समग्रमा हाम्रो कार्यकाल पूर्णरुपमा सफल भएको छ ।
गाउँ गाउँमा सिंहदरबार भनेपछि जनताले हामीसँग धेरै अपेक्षा गरेका थिए । चुनावका क्रममा जाँदा पनि जनताले हामीसँग धेरै माग गरेका थिए । ती सबैलाई सम्बोधन गरेर जानुपर्ने थियो । हामी असफल पनि हुन सक्थ्यौं, तर हामी सबै चुनौतीलाई सामना गरेर अघि बढेकाले हामी सफल भएका हौं ।
हामीले चुनावमा जाँदा बोलेका सबै कुरा यो अवधिमा पूरा भएको छ । पूर्वाधारका क्षेत्रमा धेरै कामहरु भएका छन् । जनताको बढी माग सडक विकासमा थियो, त्यही भएर हामीले पहिलो काम सडक निर्माणमा लागेका थियौं ।
अहिले सबै बस्ती बस्तीमा सडक पुगेको छ । हामी आउँदा जनता पालमुनि थिए, भुकम्बाट लडेका घरहरु अहिले पुननिर्माण सम्पन्न भएका छन् । अस्थायी टहरोबाट स्थायी छानोमुनि ल्याउनुपर्ने प्रमुख चुनौती थियो । विद्यालय भवनहरु सबै ढलेका थिए, अहिले सबै निर्माण सम्पन्न भइसकेका छन् । स्वास्थ्यका भवनहरु केही निर्माण सम्पन्न भएका छन् भने केही निर्माणको चरणमा रहेका छन् । वडा कार्यालयका भवनहरु अत्यन्तै अव्यवस्थित थिए, अहिले हामीले सबै वडा कार्यालयहरुलाई व्यवस्थित बनाएका छौं ।
खानेपानी, सिञ्चाइँलगायत भौतिक शीर्षकमा धेरै कामहरु यो ५ वर्षमा भएका छन् । जनतालाई दैनिक आवश्यक पर्ने सेवालाई चुस्त र दुरुस्त बनाउनका लागि हामीलिे धेरै मेहनत गरेका छौ । सकेसम्म जनतालाई दुःख नहोस् भनेर हामीले ध्यनपूर्वक काम गरेका थियौं । यो संरचना सामूहिकरुपमा चल्ने हो । मैले व्यक्तिगत रुपमा मात्रै चलाउने होइन । त्यसकारण यो ५ वर्ष मूल्यांकन गर्नुपर्दा हाम्रो गाउँपालिकाको टिम सौहादपूर्ण स्वस्थ ढंगले परिचालित भएको र त्यसैको कारण हामीले उपलब्धी हाँसिल गर्न सफल भएका छौं । म यो कुर्सीमा बस्दै गर्दा यति सफल भइन्छ होला भनेर सोचेको पनि थिइनँ । तर अहिले फर्केर हेर्दा हाम्रो कार्यकाल ऐतिहासिक रुपमा सफल भएको छ ।
दीर्घकालीन महत्व राख्ने काम चाहिँ के गनुभयो ?
हामीले दीर्घकालका रुपमा समेत गाउँपालिकालाई काम गर्न सजिलो होस् भनेर सडकको गुरुयोजना निर्माण गरेका छौं । हामीले २० वर्षसम्म सडकको अवस्था कता पुर्याउने भनेर सडकको गुरुयोजना र धेरै सडकहरुको डीपीआर तयार बनाएका छौं ।
भवन संहिताको मापदण्ड बनाएका छौं । आर्थिक रुपमा गाउँपालिकालाई समृद्ध बनाउनका लागि त्यसका लागि पनि आर्थिक गुरुयोजना बनाएका छौ । धेरै नीति कानून, ऐन नियमहरु बनाएका छौ । गाउँपलिकाको अर्काे भव्य भवन निर्माणको सुरुवात गरेका छौ ।
पर्यटकीय क्षेत्रहरुको निर्माणको लागि माथिल्लो सरकारसँग समेत मिलेर काम सुरु गरेका छौ । गाउँपालिकासम्म आउने सडक कालोपत्रेको काम सुरु भएको छ । जेठल, पेड्कुलगायतका स्थानमा जाने सडकहरु कालोपत्रे सुरुवात भएको छ । गाउँपालिकामा दुईवटा अस्पताल निर्माण सुरु गरिएको छ ।
केही दिर्घकालिन कामहरुको सुरुवात गरेका छौ भने केही काम जनताको दैनिकीसँग जोडिएर समस्या समाधानका लागि हजारौ कामहरु यो ५ वर्षमा भए ।
मूलतः जनताका आकांक्षा कस्ता हुँदा रहेछन् जनप्रतिनिधिसँग ?
हामी जनताका प्रतिनिधि भएकाले गाउँ, बस्तीमा जाँदा उहाँहरुले अहिले पनि धेरै माग, गुनासोहरु गर्नुहुन्छ । विकास गर्ने, हाम्रो समस्या समाधान गर्ने, यही जनप्रतिनिधि हो भनेर हामीसँग उहाँहरुको माग हुन्छ । सडक, खानेपानी, सिंचाइँ यस्तै पूर्वाधारको काममा उहाँहरुको बढी माग आउँछ । तर गाउँमा जाँदा आार्थिक रुपमा कसरी समृद्ध हुन सकिन्छ, त्यसको माग चाहिँ स्थानीयले त्यति धेरै गरेका छैनन् । हामी कसरी धनी हुने, व्यक्ति कसरी धनी हुने, आय आर्जनमा कसरी लाग्ने, यस्ता विषयमा जनताको ध्यान कम छ । जनताको बढी माग विकास निर्माणसँग नै सम्बन्धीत छ ।
विकासका काममा भएका प्रगतिहरु बताइदिनुस् न !
हामी निर्वाचित भएर आएपछि र स्थानीय सरकारमा आएको अधिकारी पछि शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकुद, खानेपानी, सिञ्चाइलगायत अन्य पूर्वाधारमा धेरै कामहरु भएका छन् । कतिपय कामहरु सम्पन्न भएका छन् भने कतिपय सम्पन्न हुने क्रममा रहेका छन् ।
शिक्षामा गुणस्तर ल्याउने उद्देश्यले हामीले तालिम, शिक्षण सामग्रीहरु विद्यालयलाई प्रदान गरेका छौ । स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेका छ । विद्यालयमा पुस्ताकलय, आइटी, विज्ञान प्रयोगशाल, विद्यालयको घेराबार, दरबन्दी अपुग भएका विद्यालयमा दरबन्दी मिलन लगायतका धेरै काम भएका छन् ।
स्वास्थ्यमा हामीले दुईवटा अस्पताल गाउँपालिका भित्र निर्माणको सुरुवात गरेका छौं , अझ कोरोना कहरका बीचमा हामीले जनतालाई बचाउने धेरै कामहरु गरेका छौ । सुत्केरी र गर्भवती महिला लक्षित नयाँ कामको सुरुवात गरेका छौं ।
खेलकुद क्षेत्रमा पनि हामीले एक वडा एक खेलमैदानको अवधारणा सारेर कामहरु गरेका छौं । केही वडामा खेलमैदानहरु निर्माण सम्पन्न भएका छन्, केही वडामा आगामी वर्ष निर्माण हुने चरणमा रहेको छ । हामीले गाउँपालिकाभित्र रंगशाला निर्माणका लागि प्रदेश सरकार सँग आग्रह गरेका छौं । गाउँपालिका भित्रका ९० प्रतिशत घरधुरीलाई खानेपानीको पहुँच भित्र ल्याएका छौं ।
जनतालाई धनी बनाउने कार्यक्रमहरु चाहिँ गाउँपालिकाले केही गरेन त ?
होइन, हामीले लिसंखुपाखरबासीको आयआर्जनमा वृद्धि गर्ने, यहाँका जनतालाई धनी बनाउने गरेर धेरै कार्यक्रमहरु सुरु गरेका छौ । गाउँपालिका आफैले अध्यक्ष उद्यमशीलता कार्यक्रम सुरुवात गरेको छ । यसमा जनताले १ प्रतिशत ब्याजदरमा १ लाखदेखि १० लाखसम्म ऋण लिएर गाउँमा नै उद्यम गर्न सक्छन् । अहिले धेरैले यो कार्यक्रममार्फत ब्याज अनुदानमा रकम लिएर गाउँमा उद्यम सुरु गर्नुभएको छ ।
त्यस्तै उपाध्यक्ष विपन्न उत्थान उद्यमशील विकास कार्यक्रमको सुरुवात भएको छ । यसमा दुई सयभन्दा बढीलाई एक वर्षमा अनुदान दिने योजना रहेको छ । उहाँहरुले आफ्नो सीपअनुसारको काम गर्नका लागि अनुदान दिन्छौं ।
कम्तिमा तीन रोपनीमा तरकारी खेती गर्नेहरुलाई ३० हजारसम्म अनुदान दिने सुरु गरेका छौ । कृषि क्षेत्रको विकासका लागि विभिन्न यान्त्रिक उपकरणहरु हामीले दिएका छौं । त्यस्तै प्रदेश र संघको पनि आयआर्जनसँग सम्बन्धीत धेरै योजनाहरु थिए । हामीले त्यो पनि जनतालाई दिएका छौं । हामीले जनतालाई विस्तारै धनी बनाउने कामहरुका सुरुवात गरेका छौं । त्यसको प्रतिफल अहिले नै देखिँदैन होला तर विस्तारै त्यसको प्रभाव र उपलब्धी देखिन्छ ।
मुडेको आलुलाई व्यवस्थित बनाउनका लागि गाउँपालिकाले केही योजनाहरु नबनाएको आरोप छ नि ?
त्यो विल्कुल होइन । हामीले हाम्रो गाउँपालिकाको समृद्धिको मुख्य आधार नै कृषि देखेका छौं । त्यसैले यहाँ उत्पादन हुने आलुलाई अझै व्यवस्थित गर्नका लागि पहिलो वर्ष प्रदेश सरकारसँगको साझेदारितामा ५० लाख विनियोजन गरेका थियौं । हामीले आलु ब्राण्डिङ गर्ने, प्याकेजिङ गर्ने र समूहमार्फत त्यो कार्यन्वयन गर्न खोजेका थियौं । पहिलो वर्ष त्यो धेरै सफल हुन सकेन । हामीले मुडेको आलुलाई प्याकेजिङ र ब्राण्डिङका लागि थप बजेट विनियोजन गरेका छौ ।
आलुलाई मात्रै होइन, गाउँपालिकामा उत्पादन हुने अन्य तरकारीहरु एकै ठाउँमा संकलनका लागि हामीले प्रत्येक वडामा तरकारी संकलन केन्द्र बनाएका छौं । र जनताले उत्पादन गरेका तरकारी निःशुल्क ढुवानीको सुरुवात समेत गरेका छौ । यहीको आलुलाई लक्षित गरेर हामीले प्रदेश सरकारसँग साझेदारीमा कोल्ड स्टोर निर्माणको सुरु गरेका छौ ।
कृषि क्षेत्रमा परिवर्तन गर्ने उद्देश्यले गाउँपालिकाले धेरै कामको सुरुवात गरेको छ । तर त्यसका लागि जनतामा चेतनास्तरको वृद्धि हुनुपर्छ । त्यसो भएमा मात्र हामीले सुरु गरेका योजनाहरुले सार्थकता पाउँछ ।
यो अवधिमा चाहेर पनि गर्न नसकेको काम केही छन् ?
हामीले चुनावमा जनतासँग गरेका सबै वाचा पहिलो वर्ष नै पूरा गरेका छौ । तर जनताको माग हरेक वर्ष थपिदै जाँदो रहेछ । जनताको बीचमा जाँदा धेरै ठूला माग नै आउँदैनन् । आएका सबै मागहरु पहिलो वर्ष नै पूरा भए । हामीले केही सडकहरु कालोपत्रे गर्छौं भनेका थियौं, त्यो सकिएन । अर्काे २१ किलोदेखि वाफलसम्मको सडक स्तोरन्नति र कालोपत्रे गछौं भनेका थियौं, त्यो पनि आंशिक मात्रै पूरा भएको छ ।
अर्काे हाम्रो गाउँपालिकामा केही वडाहरुमा अहिले पनि गुठीको समस्या रहेको छ । त्यसलाई समाधान गर्न सकिएन । त्यसका लागि संघीय सरकारसम्म धेरैपटक हामी गएका थियौं । तर पनि त्यो पूरा गर्न सकिएन । जनताले भनेका र मागेका अन्य सबै कामहरु पूरा गरेका छौं ।
तपाईं आवद्ध दलको प्रदेश र संघमा पनि सरकार थियो । तीनै तहमा आफ्नै पार्टीका सरकार हुँदा पनि गाउँपालिकामा किन धेरै बजेट आएन त ?
प्रदेश सरकारमार्फत हाम्रो गाउँपालिकामा करोडौंका बजेटहरु आएका छन् । २१ किलोदेखि गाउँपालिकासम्म आउने सडक कालोपत्रे हुँदैछ । अन्य चार वटा सडकहरु कालोपत्रे निर्माणमा प्रदेश सरकारले नै बजेट पठाएको हो । अन्य धेरै संरचनाहरु निर्माणमा प्रदेश सरकारले करोडौं बजेट पठाएको छ र कार्यान्वयन पनि भइरहेको छ । प्रदेशको तुलनामा संघबाट चाहिँ कम बजेट नै आएको हो ।
अरु गाउँपालिकासँग म तुलना गर्दीनँ । उहाँहरुले पनि धेरै राम्रो कामहरु गर्नुभएको छ । हामीले कृषिमा परिवर्तन ल्याउने हिसाबले अनुदानको सुरुवात गरेका छौं । हुन त अनुदान दिने व्यवस्था राम्रो होइन तर हामीले यसको प्रभावकारिता बढ्ने हिसाबले काम गरेका छौं । अर्काे अध्यक्ष उद्यमशीलता कार्यक्रम, जुन १ प्रतिशत ब्याजदरमा १ लाखदेखि १० लाखसम्म ऋण दिन सुरु गरेका छौं । सडक र पूर्वाधारका क्षेत्रमा पनि केही नयाँ कामहरुको सुरुवात गरेका छौं । यी काम नयाँ नै हुन् ।
तपाईं नेकपा एमाले सिन्धुपाल्चोकको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ । फेरि गाउँपालिकाको अध्यक्षमा दोहोर्याउने सोच बनाउनु भएको छ कि छैन त ?
म यो कुर्सीमा बसेको दिन नै भनेको थिएँ– म यो कुर्सीमा ५ वर्ष बस्ने हो, जनताको अपेक्षा पूरा गर्ने, अधिकतम सम्बोधन गर्ने र अर्काे ५ वर्षको लागि नजाने । मेरो सुरुदेखिकै कुरा यही हो । अब नेतृत्वको पनि विकास गर्नुपर्छ । एउटै मान्छेले मात्रै दाबी गरिरहनु हुँदैन ।
विकासमा नयाँ कामको लागि पनि नयाँ मान्छे चाहिन्छ । हामीले धेरै कामको थालनी गरेका छौं । अर्काे जनप्रतिनिधि आएपनि हामीले थालनी गरेका कामको निरन्तरता नै हुन्छ । यो कामहरुलाई निरन्तरता दिन म नै आउनु पर्छ भन्ने छैन । अब नयाँ प्रतिबद्धता र घोषणापत्र लिएर नयाँ कामको साथ अरु साथीहरु आउनु हुन्छ ।
नैतिक हिसाबले पनि अब मलाई टिकट दिनुहोस भनेर भन्दिनँ । राजनीतिमा नैतिकताको पनि कुरा हुन्छ । म टिकटको दाबी गर्ने सोचमा छैन । तर पार्टीले जर्बजस्ती निर्णय गरेर ‘तँ’ नै जानुपर्छ भन्यो भने म टिकट च्यातेर हिँड्निँ । किनभने म पार्टीको कार्यकर्ता हो । बाध्यात्मक परिस्थितिबाहेक म रिपिट हुँदिन ।
प्रकाशित: २०७८ चैत २९ गते ११:४७
One thought on “‘सके जति काम पाँच वर्षमै गरें, फेरि अध्यक्ष हुन चाहन्नँ’”
उहाँको कार्यकालमा जनताको माग अनुसार साना, मझौला खालका पुर्वाधारको यथोचित ब्यवस्था गर्न सक्नु भएको मा कहिलेंकाही म आफू पनि अचम्मित भएं होइन कसरी मागे बमोजिम योजना बाँडफाँड गर्न सकेको हो अन्य भएको भए यति सुक्ष्म रुपले ब्यवस्थापन गर्न पक्कै पनि सक्थिंदैन थिए होला । यो भुकम्पले थिल्थिलो भएको र ३ बर्ष कोरोना कहरको अवस्थामा पनि यति बिघ्न बिकासको फड्को मार्न सफल भएकोमा सम्पुर्ण पालिका टिमलाई मुरि मुरि धन्यवाद ।